PT-141 (Bremelanotide): Nampiasa zava-mahadomelina vaovao ny vehivavy
2. Ahoana no iasany?
3. Fampiharana PT-141
4. Ny tombontsoan'ny PT-141
5. PT-141 ho an'ny tsy fahampian-tsakaiza
6. Ahoana ny fampiasana PT-141
7. Fihetseham-po azon'ny mpampiasa PT-141
8. Fahavoazana Taorian'ny fampiasana ny PT-141
Ho fampiroboroboana ny firaisana ara-nofo izay miteraka fanafody amin'ny vehivavy ao anatin'ny minitra vitsy, PT-141 no tena zava-dehibe. Bremelanotide avy amin'ny Melanotan II; Noho izany, dia manome ny vokany aphrodisiac. Manampy koa i Melanotan II amin'ny fanomezana ny pigmentation hoditra ary ny fitsaboana ny aretina ara-piraisana ara-nofo, ka ao anatin'izany ny faniriana feno fitiavan-tena amin'ny vehivavy.
Ny peptide PT-141 dia tsy vita amin'ny vatana toy ny hormonina hafa. PT-141 (189691-06-3) Ny maha-agonista tsy misy selekta ny mpandray ny melanocortin dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana ny aretina ara-nofo nandritra ny fotoana ela.
Ny nahitana ny PT-141 ho iray amin'ny fampitomboana ara-pananahana dia mahavariana ny zava-mitranga. Mpanolo-tsaina iray fantatra amin'ny anarana hoe Mac Hadley no nanolo-tena ny tenany ho toy ny mari-pandrefesana ary raha nanandrana ny vatany manokana dia naharitra ora adiny nahitsy. Izany dia vokatry ny fananana dombo indroa an'ny Melatonin II, fikambanana iray hita vao haingana.
Ny fitsapana Melanotan dia natao voalohany tamin'ny raty tao amin'ny 1960 ary nandeha tamin'ny 1980s. Ny Melanocortins dia fantatra fa manana andraikitra manan-danja eo amin'ny fitsipi-pifehezana maro amin'ny asa ara-batana. Melanotan 1, izay fanazavana an-tsoratra Melanocortin, dia nosedraina ho toy ny mpangalatra ary i Melanotan II dia nosedraina ho mpitsabo mpanimba.
Ny fampiasana azy anefa dia najanona taorian'ny nahitana fa nitarika ho amin'ny fitomboan'ny tsiranoka amin'ny foto-pitsaboana. Ao amin'ny 2016, ny peptide PT-141 dia nankatoavin'ny FDA ho fitsaboana ny tsy fahampiana ara-nofo amin'ny vehivavy.
2. Ahoana no miasa?
Ny PT-141 dia miasa amin'ny hypothalamus, mitarika mivantana amin'ny faniriana hanao firaisana ara-nofo. Mifatotra amin'ny mpitsidika melanocortin hita ao amin'ny atidoha izany, ka mandefa hafatra any amin'ny taolam-paty any amin'ny taovam-pananahana. Tsy toy ny fanafody ara-nofo hafa toy ny Viagra, izay miasa ao amin'ny rafitra vascular, PT141-141 mivantana mivantana ny libido iray. Izany no antony tsy tokony ho raisina ho aphrodisiacs ny fanafody hafa firaisana ara-nofo raha tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny faniriana mivantana.
Miasa amin'ny PT-141 amin'ny fanentanana sy fampiharana ny hôpôn dopamine, izay fantatra fa manana anjara lehibe amin'ny famporisihana ny fanentanana hanao firaisana ara-nofo. Dopamine dia fikambanana fanta-daza iray izay taratry ny neurotransmitter ary ny anjara asany dia ny manentana ny fampisehoana. Raha misy ambany ny dopamine ambany, dia midika izany fa ambany ihany koa ny libido. Ny antsasaky ny PT-141 dia manodidina ny 120 minitra.
♣ PT-141 nasal sprays
♣ Ireo hafa.
♦ Manamafy ny fahafaham-pon'ny filahiana
Indray mandeha ve ianao no nanontany tena hoe inona no azonao atao mba hahafa-po ny firaisana ara-nofo? Ny marina dia indraindray tsy mihoatra noho ny fanaovana firaisana ara-nofo ihany no hahatratrarana ny 'O.' Mety hanome anao orgasms ny firaisana, fa tsy toy ny eritreritra toy izany. Ho an'ny vehivavy dia mihasarotra kokoa aza raha oharina amin'ny lehilahy noho ny anatomiany.
Ny maha-zava-dehibe ny fampiasana mpanentana ara-nofo amin'ny famoahana orgasme dia tsy azo ovaina loatra. PT-141 ho an'ny vehivavy dia manome fahatsapana hafanam-po tanteraka rehefa miresaka firaisana ara-nofo. Raha toa ianao ka mitady ny zavatra ilaina hampitomboana ny fahafinaretanao ara-nofo, dia azo antoka ny fampiasana zava-mahadomelina mahagaga.
♦ Manome hery bebe kokoa
Azonao atao ny mitondra fiofanana ara-nofo ambony nefa tsy misy hery hanaovana izany. Ny tsy fahampian'ny angovo dia tsy vitan'ny fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny lahy sy ny vavy ihany fa ny andavanandrom-piainanao isan'andro koa. Midika izany fa tsy hahita fahafinaretana intsony ianao amin'ny fandraisana andraikitra sasantsasany amin'ny zavatra tianao indrindra ho lasa tsy mavitrika.
Ny tsy fisian'ny angovo dia tsy midika fa efa tapitra ny fiainanao. Tsy ilaina ny manahy ny ahiahy satria misy fomba iray ahafahanao mahazo fanatsarana angovo sy ny fihetseham-ponao.
Raha mampiasa PT-141 ianao dia hahatsapa fa mahazo hery bebe kokoa ianao ary mahatsapa koa ny tanora.
♦ Mitombo ny fahatokisan-tena
Ny iray amin'ireo antony manan-danja izay mamaritra raha ho afa-po amin'ny firaisana ianao dia ny fahatokiana anananao. Ny fahatokisana ara-nofo dia ny fiantohana azonao izay azonao atolotra any am-pandriana. Ohatra, raha efa niaina tany am-boalohany ny orgasme taloha ianao teo amin'ny traikefa ara-nofo taloha, dia azo inoana fa ho azonao ny fahatokiana fa efa nahay ny zavakanto ianao.
Io no iray amin'ireo toetra mampiavaka ny firaisana ara-nofo. Rehefa matoky tanteraka ny fandriana ianao, dia mety ho mahafinaritra noho ny efa misy ny traikefa rehetra. Arakaraka ny itiavanao azy no ahafahanao mahazo aina kokoa rehefa manao firaisana.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fahatokisana ara-pitondrantena dia tsy mora ny mahatratra izany satria mieritreritra izy ireo fa ny fahalemen'izy ireo dia nandoa azy ireo. Rehefa lasa ambany ny fatokisanao dia lasa goavana ny fanatontosana ny orgasme. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny fampitomboana ara-pananahana dia ny mahatonga anao hanana firaisana ara-nofo mahafa-po indrindra.
PT-141 amin'ny dia miresaka ny olana rehetra eo amin'ny lahy sy ny vavy ka manome anao ny fahatokiana izay nilainao foana. Vehivavy azo antoka ny vehivavy dia fantatra fa mavitrika kokoa ny fanaovana firaisana ara-nofo ary mahafinaritra kokoa ny ao am-pandriana. Tsy mahagaga raha ny fampiasana azy PT-141 ho an'ny vehivavy mitombo isan'andro. Raha vantany vao mampiasa PT-141 ianao dia mampanantena anao aho fa hitombo be ny fahatokisanao ara-nofo amin'ny fotoana fohy.
♦ Ampitomboina ny libido sy ny faniriana hanao firaisana
Fantatrao fa ny fiheveran'ny namanao dia manome anao rehefa matory na matory ianao mba hisorohana ny firaisana. Vao mainka manjavozavo izany rehefa manomana azy ny olon-dehibe hafa, fa izany no zavatra farany azonao eritreretina. Mety hanelingelina ny fifandraisanao izany, indrindra raha tena tsara ny taona teo aloha.
Ankehitriny, mihoatra ny 30% ny vehivavy mijaly noho ny tsy faniriana hanao firaisana ara-nofo manerantany. Ny antony mahatonga izany dia lasa mahazatra eo amin'ny vehivavy dia ny antony maro no mahatonga izany. Na dia eo aza ny habetsan'ny estrogen na ny fiovan'ny hormona famokarana, dia ny antony mahatonga ny faniriana hanao firaisana ara-nofo dia afaka manamboatra valim-panatanjahan-tena, fametram-piterahana, olana ara-pihetseham-po, reraka, ketraka, adin-tsaina, ary fanafody sasany.
Raha tsikaritrareo fa lasa ambany kely ny fahaliananao amin'ny firaisana ara-nofo, dia mety ho marika mampihoron-koditra ny faniriana hanao firaisana ara-nofo. Ny zavatra tsara dia ny PT-141 noho ny fialana amin'ny firaisana ara-nofo dia afaka manampy amin'ny fanafoanana izany. Izany dia miantoka fa manangona vatana manontolo ianao ary mihodina matetika.
♦ Mandika ny hoditra
Ankehitriny dia lasa malaza ny fampirimana ny hoditra. Tamin'ny andro taloha, ny hoditra dia marika fa ny iray dia niasa teo ambanin'ny masoandro nandritra ny ora maro. Amin'izao fotoana izao, ny hoditra hoditra dia heverina fa ho an'ireo izay tia ny firoboroboana sy ny fahitana hafanana tsara. Miaraka amin'ny olona manao firaisana amin'ny karazam-bozaka toy ny lozam-piravahana, ny filibona tsy misy jiro, ny fampiroboroboana ivelany, ary ny fampiroboroboana indostrialy, inona no eritreretinao fa ny tombotsoan'ny fampiroboroboana?
Ny fampirimana dia hanome anao an'io tanam-be volamena io izay hamela ny olona rehetra ho maizina. Raha toa ianao ka karazan'olona tia mitsangana, dia tokony hiditra ao amin'ny lisitry ny bokinao ny hoditra. Ireo olo-malaza dia nandoa an'arivony dolara mba hanefana ny hodiny satria izany no mahatonga azy ireo hanana fiantraikany bebe kokoa amin'ny asany. Isika roa dia afaka manaiky fa ny hoditry ny hoditra dia manjary malemy sy maivana. Na betsaka toy inona aza ny fiakanjo tsara indrindra, volo mitady volo sy ny nify fotsy, ny tanan'ny volamena dia afaka mankasitraka ny fijerinao nefa tsy mila miady loatra loatra.
Raha mpiangavy bodista ianao ary mahatsapa fa tsy voamarikao ny vatanao, dia tokony hanandrana ny hoditra ianao. Manamafy ny fifandraisana eo amin'ny vatanao ny fotoana, mahatonga ny fitomboanao ho hita kokoa. Efa niady sy nanome ny gym ny rehetra ianao, maninona no tsy mahazo fotoana hankalaza anao ny mozika?
Misy fomba maro ahazoana fotoana, saingy ny PT-141 fampiharana mitondra ny andro. Ny fipoahan'ny masoandro loatra dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny hoditra ary vao mainka mihombo ny homamiadan'ny hoditra. Ny iray amin'ireo tombony PT-141 dia ny fiarovana sy ny tsy ahafahana mampisy vokatra hafa. Bremelanotide dia manome anao fotoana mahafinaritra, satria misy fiantraikany amin'ny famokarana melanin, izay tompon'andraikitra amin'ny pigmentation hoditra. Noho izany raha te hanana fikolokoloana azo antoka foana ianao ary iray izay hanome anao vokatra tsara, PT-141 (189691-06-3) no lalana tokony haleha.
♦ Fitarihana matanjaka kokoa
Hitanao ve fa sarotra ny fananganana tohana mafy kokoa? Tsy ianao irery no. Lehilahy an-tapitrisany no mijaly amin'izany ary mahatsiaro ho menatra ny ankamaroan'izy ireo ka hilaza na amin'iza na amin'iza mihitsy.
Ny lehilahy tsirairay dia maniry mafy ny hanangana rafitra mahery vaika. Na ireo izay sambatra amin'ny pensilihazo dia mila manamboatra ny fehezan-teny mafy mba hanana firaisana ara-nofo mahafinaritra. Eny raha te hampiasa PT-141 fampiasana matanjaka kokoa. Fampiroboroboana ara-pananahana lehibe izany, izay manome antoka fa ny vatanao dia mafy toy ny vatolampy.
(1). Mifanaraka amin'ny fanamafisana ara-nofo hafa
Ny PT-141 dia mizara fitoviana maro amin'ireo fampivoarana ara-pananahana hafa toy ny viagra, saingy misy koa tsy fitoviana vitsivitsy. Araka ny voalaza teo aloha, ny PT-141 dia miasa amin'ny alàlan'ny hypothalamus ka miantraika mivantana amin'ny filan'ny nofo. Etsy andaniny, asa hafa ao amin'ny rafitry ny vascular amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny habetsaky ny ra mikoriana manerana ny vatana, indrindra fa ny razana. Ny fampivoarana ara-pananahana toy izany dia tsy azo antsoina hoe aphrodisiacs.
Araka ny tatitry ny PT-141, ny vokatra PT-141 dia mamaritra ny fotoana fohy indrindra hanandramana ny fiantraikany. Ohatra, ny vehivavy sasany dia mahatsikaritra fiovana sasantsasany ao anatin'ny minitra vitsy ho an'ny hafa, mety maharitra ora maro izany. Amin'ny ankapobeny, ny PT-141 dia iray amin'ireo fampihetseham-batana ara-pananahana haingana izay mety ho tsapan'ny tsy fahampian-tsakafo ara-pananahana ao anatin'ny fotoana fohy.
(2). Moa ve ny PT-141 bebe kokoa ho an'ny vehivavy?
Ny fampiasan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny PT-141, dia hita fa tena tian'ny vehivavy izy. Izany dia satria manome azy ny ankamaroan'ny tombontsoa sy ny voka-dratsiny kokoa raha ampitahaina amin'ny hafa. Ny soritr'aretina tokana izay misy fiantraikany amin'izy ireo dia ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fery, izay tsy fahita firy.
Ankoatra izany, ny vehivavy dia namaly tsara kokoa ny zava-mahadomelina raha oharina amin'ny lehilahy. Ny PT-141 dia tonga mpamonjy ny vehivavy satria tsy dia misy fanafody firy mahasalama amin'ny vehivavy.
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fampiharana PT-141 dia amin'ny alalan'ny fampidirana. Ny fampidirana dia matetika mahasoa ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fitsaboana olana ara-pahasalamana.
Matetika ny fitabatabana no ampiasaina, ary misy tahiry betsaka kokoa. Matetika, ny teboka misy tsindrona dia manodidina ny faritra misy kibo sy ambany kibo na ny feny. Ny jabs dia tokony homena amin'ny fotoana mitovy amin'izany andro izany mba hahafahanao mahazo ny tsara indrindra PT-141 traikefa.
Ny dosage jenerala PT-141 ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia 2mg, izay tokony homena adiny iray alohan'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Raha vao manomboka io dia azonao atao ny mametraka 1mg ho doka fitsapana alohan'ny hampidirana ilay 1mg hafa telopolo minitra taty aoriana.
Mba hisorohana ny tsy fetezena, tsy tokony hihoatra ny 2mg ianao mandritra ny roa amby fitopolo ora. Ianao dia tokony hifidy ny fotoana tsara indrindra, izay mety aminao.
Ny SPA-141 ranon-tsakay dia fomba mahazatra hafa amin'ny fitantanana PT-141. Maro ny olona maniry izany satria mora kokoa ny mampiasa. Amin'ny alalan'ny fampidirana ny PT-141, azonao atao ny mahazo ny libido izay efa notadiavinao. Ireto ny dingana apetraky ny PT-141 fampiasana ny ranomaso nasalotra;
Tsofy moramora ny oronao mba hanazava ny andalana ho an'ny fanafody.
Vakio ny torolàlana rehetra momba ny fonosana alohan'ny handaminana izany. Mialà alohan'ny fampiasana ary asio kely kely raha aseho izany.
Aripaho amin'ny tavoahangy ny tavoahangy ary atsangano ny fanafody amin'ny vavanao. Izany dia azo ampiharina raha eo amin'ny toerana ambony ianao ka tsy voatery hisintona ny lohanao hiverina. Tohizo foana ny tavoahangy ary asio izy mba tsy ho voaloto.
Ny libido dia miverina amin'ny ara-dalàna
Hoy i Agnes K, "Tamin'ny voalohany aho no nividy ity vokatra ity ho an'ny lomano hoditra. Ny valin-kafatro dia namaly tsara, ary nanapa-kevitra ny hanohy ny fampiasana azy aho. Zavatra iray izay nahatonga ahy ho tia ny traikefa PT-141 no mampitombo ny libido. Tsy nieritreritra aho fa hiova ny libido raha vao efa nanandrana ny fanafody rehetra noraisina toy ny fanafody mahagaga tsy misy ilàna azy. Hatramin'ny alin'ny alin'io dia nampiasa izany aho, dia teo ny faniriako. Ankafiziko izao miaraka amin'ny namako isaky ny alina. Manontany tena aho hoe nahoana aho no tsy nahalala an'izany. Tena afaka miady saina be aho. "
Hoy i Lilian D., "Nanao firaisana tsy nahafa-po aho nandritra ny fotoana nahatsiarovako. Ny libido-nao dia nalaza avy amin'ny olona iray izay tsy nahatsapa na inona na inona nandritra ny filalaovana. Natao tamin'ny dokotera aho, ary nankahala ny vokany, indrindra fa ny fo sy ny tsy fahitan-tory. Ny zavatra niainako PT-141 dia tsy mitovy. Mahalana aho no mijaly noho ny zavatra hafa rehetra, ary na dia avy amin'ny Fitsipika PT-141 Efa namaky an-tserasera aho, olona vitsy no nijaly. Amin'izao fanamafisana ny firaisana ara-nofo izao dia afaka mankafy ny fiainako amin'ny firaisana aho amin'izao fotoana izao nefa tsy mandoa ny vidin'ny fijaliana amin'ny vokatra maro hafa. Misaotra anao, PT-141.
Manolotra ny vokatra tsara indrindra
Maggie S. dia nilaza hoe, "Manolo-tena amin'ny hoditra aho ary efa nanao izany nandritra ny dimy ambin'ny folo taona lasa. Nieritreritra aho fa hanandrana hamoaka ity vokatra ity rehefa avy namaky ny fanamarihan'ny PT-141 ary nahitako vitsivitsy vitsivitsy talohan'ity sy taorian'ny sariny izay mampiseho fa tena mety hanome lanja voajanahary. Gaga aho ary faly tamin'ny vokatra. Ny lozam-piravitro ampiasaiko dia nandao ahy tamin'ny fofona maharikoriko, saingy izany no zavatra taloha. Nanjavona ilay loko mena izay nomeny ahy, ary hitako ankehitriny ny endriny. Tiako ny zava-misy fa heverin'ny olona fa teraka tahaka izao aho. Andramo ity, ary aza mieritreritra mihitsy izany. "
Manome ny tsara indrindra orgasms izy io
Benjamin Paterson niteny hoe: "Vao haingana dia nijanona ny orgasms ny vadiko, ary toa nikapoka vato daholo ny zavatra rehetra nataoko. Very ny fahalianany, ary tsy nanam-pahatokisana intsony aho satria nahatsapa aho fa tsy afaka ny hanome fahafaham-po azy. Niresaka tamin'ny dokotera aho, ary nanolo-kevitra fa hiezaka izany aho. Tsy dia nanahy loatra momba izany aho fa nanapa-kevitra ny hanome ny vadiko amin'ny tsingerintaona nahaterahany ary hijery ny fandehany. Gaga aho fa nanana izany tsara izahay tamin'iny alina iny. Nihetsi-po kely izy ary nilaza tamiko fa tsy nanana orgasme mafy nandritra ny taona maro izy. Nahatsapa aho fa afaka ny hankafy ny fitiavantsika ny vadiko amin'ny farany. Nandidy ny sambo manaraka izahay ary tsy afaka miandry izany. Hanolotra izany ho an'ny olona iray izay mahatsapa fa tsy afaka manana orgasma intsony izy ireo. "
Hoy i Jesica S., "Ity mpanentana ara-nofo ity no vokatra tsara indrindra hitako hatramin'izao. Nandritra ny taonan'ny fahanterako aho dia niharan'ny aretina naloako, ary mbola tsy nisy toy izany mihitsy. Ankoatra ny fahamaotin'ny vagiônina sy ny fahatsapana tsy mampahazo aina, dia nahatsapa fanaintainana foana aho satria tsy tia manao firaisana mihitsy. Nanampy ahy ny PT-141, indrindra fa ny orgasme. Mahatsiaro ho maivana aho, ary tiako foana izany. Milaza ny vadiko fa tsy mbola nijery ity sexy ity mihitsy aho ary te hampiasa izany koa. Manana fahasamihafana goavana eo amin'ny fiainam-pianakaviako ny PT-141, ary velom-pisaorana mandrakizay aho. Mendrika ny ho an'ny tsirairay koa ny vola. "
8.Fahavoazana Taorian'ny fampiasana ny PT-141
Olona maro no mandray io zava-mahadomelina io, mahatsapa ho tsara Ny vokatra PT-141. Tsy mahagaga raha mbola miantehitra aminy izy ireo mba hanasitranana ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hoditra. Na dia manolotra izany rehetra izany aza izy dia ilaina ny mahafantatra fa tahaka ny misy ny tombontsoa azo avy amin'ny PT-141 dia mety hitranga izany.
Tsy midika izany fa tsy maintsy mijaly amin'ny vokatra hafa ianao; Aleo anefa misy loza mety hitranga izay tsy mety na tsy ampoizina. Ny sasany mety tena malemy fa tsy ho hitanao mihitsy. Ny hafa dia mandeha ao anatin'ny roa tolakandro amin'ny fampiasana azy. Ireto ny sasany amin'ireo vokatry ny mety hampahory anao rehefa mampiasa PT-141 ianao;
Mihabetsaka ny heloka bevava ara-nofo - Ny olona sasany dia afaka manararaotra an'io zava-mahadomelina io mba hanafika amin'ny herisetra ara-nofo sy ny endrika hafa amin'ny herisetra ara-piraisana. Izany dia satria mety tsy ho vonona ny hifehy ny faniriany hanao firaisana ara-nofo ny olona iray noho ny fanitsakitsahana ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Ny faniriana hanao firaisana ara-nofo tsy alefa- Ny faniriana tafahoatra hanao firaisana na dia aorian'ny fiatrehana izany aza dia iray amin'ireo vokatra mety hampijaly anao rehefa avy naka io fanafody io.
Mialà haingana rehefa avy nitsoka an'io zava-mahadomelina io
Fitsaboana ara-pitsaboana, toy ny fiakaran'ny tosi-drà
Ny fanaintainana eo amin'ny toeram-pamokarana - Ny injections dia fantatra fa miteraka fahaketrahana kely aorian'ny fitantanana. Ara-dalàna izany matetika raha tsy mihamafy ny fanaintainana na ny aretina. Mba hisorohana an'io zava-mitranga io, dia ampiasao foana ny fanjaitra mamohehatra.
Resin'ny aretin-tena ambony
Ny fananana mpiara-miasa dia tokony ho ny raozy rehetra, ny mamy, ny sôkôla ary ny romantika. Raha tsy toe-javatra ho anao izany, dia mety hahita tebiteby ianao, indrindra raha mijaly amin'ny olana libido ianao. Ny firaisana ara-nofo dia tsy misy afa-tsy amin'ny fifandraisana, fa ampahany manan-danja amin'ny fiainan'ny olombelona izany. Ny fananana fiainana ara-pahasalamana tsara dia efa manatsara ny fahasalamana ankapobeny ary misoroka ny iray amin'ny fijaliana amin'ny aretina sasany koa.
Raha nahatsapa toy ny hoe lasa mihetsiketsika ny fiainanao, ary lasa tsy dia liana ianao, dia mila mampiditra vola amin'ny fahafinaretana ara-nofo ianao. Ao amin'ny fikarohanao zavatra iray hanasitranana ny fiainanao amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo, dia mety hahitanao torohevitra maro sy tricks ianao, izay mety tsy hiova. By incorporating manatsara ny firaisana ara-nofo, afaka manao firaisana kokoa sy mahafinaritra ianao.
Ankehitriny, maro ireo mpanentana amin'ny fanabeazana ara-nofo any an-tsena dia mampanantena anao ny fitomboan'ny libido sy ny fiaretana. Ny ankamaroan'izy ireo dia fitaovam-pandraharahana ara-barotra nataon'ireo mpivarotra ho toy ny fivarotana paikady.
Raha ny marina, ny ankamaroan'ireto fanafody ireto dia tsy nikaroka ara-pahasalamana ary ny zavatra nolazaina dia mety tsy marina. Alohan'ny hametrahana fanamafisam-peo amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy maintsy mandeha amin'ny iray izay azo antoka ho anao, ary avy amin'ny mpamatsy azo itokisana. Ny kalitao dia tokony ho laharam-pahamehana lehibe indrindra rehefa manapa-kevitra ny hametraka ny mpandefa anao amin'ny fampitomboan'ny fanamafisana.
Raha mbola manontany tena ianao hoe iza no hampihena ny vidim-piainana ary hividy izany, dia afaka manampy anao handray izany fanapahan-kevitra izany. Isika no tsara indrindra Mpanamboatra PT-141 izay hanolotra anao amin'ny PT-141 tsara indrindra noho ny tsy fahampian-tsakafo. Nahoana ianao no tsy hampiakatra ny fitondran-tenanao amin'izao fotoana izao?
Erectile Dysfunction, Fanontana klinika urolojika-E-boky, nataon'i Culley Carson
Fahasamihafana eo amin'ny vehivavy, avy amin'i Marta Meana.
Fihetseham-behivavy sy tsy fahombiazan'ny vehivavy, natontan'i Elisabetta Consantini, Donata Villari, Maria Teresa Fibcamo
2019-10-30 ao amin'ny 1: 38 pm
Hallo, gibt es diedes Medikament auch in Pulver?
2019-10-31 ao amin'ny 3: 33 am
Ja, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der suburige PT141 empfohlen. Es ist PT141 Injektion.